धनगढीमा तेक्वान्दोको ‘ पाइलट प्रोजेक्ट ’ « KhelkudNews.com
धनगढीमा तेक्वान्दोको ‘ पाइलट प्रोजेक्ट ’
Published On : 24 February, 2020 4:58 pm
धनगढी उपमहानगरपालिकामा तेक्वान्दोको ‘ पाइलट प्रोजेक्ट ’ सुरु हुने भएको छ । नेपाल तेक्वान्दो सङ्घका प्राविधिक सल्लाहकार तथा कोरिया प्रतिनिधि प्रा. सिद्धार्थ विक्रम पाँडेको पहलमा तेक्वान्दो प्रमोसन सेन्टरको सहयोगमा धनगढीमा यो आयोजना सुरु हुन लागेको हो । यसै आयोजनालाई मूर्त रूप दिन प्रदेश नं सात तेक्वान्दो सङ्घ र धनगढी उपमहानगरपालिका बिच सम्झौता भएको छ ।
सम्झौता पत्रमा सात नं प्रदेश तेक्वान्दो सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप थापा तथा धनगढी महानगरपालिकाका मेयर नृप बहादुर वडले हस्ताक्षर गरे । यो पाइलट प्रोजेक्ट अन्तरगत धनगढीका विद्यालयहरूमै तेक्वान्दो समावेश गरिने छ । साथै, धनगढीमै तेक्वान्दोको नियमित र व्यवस्थित प्रशिक्षण गराइने छ ।
यो प्रोजेक्ट नेपाल भित्र्याउने क्रममा मेयर वडका साथै नेपाल तेक्वान्दो सङ्घका सदस्य तथा सुदूर पश्चिम प्रवेश समन्वयकर्ता साम्राज्यविक्रम पाँडे,प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप थापा र कैलाली जिल्ला फुटबल सङ्घका अध्यक्ष मोहित शाही, धनगढी क्रिकेट एकेडेमीका अध्यक्ष सुवास विक्रम शाही र धनगढी टिमका संयोजक महेश शाहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको थियो । दक्षिण कोरियामै रहेका तेक्वान्दोका समन्वयकर्ता प्राध्यापक पाँडे सहित सोधकर्ता प्रभात पाठक तथा इ. सिद्धान्त विक्रम पाँडेले विशेष पहल गरेका थिए । यो प्रोजेक्ट बिस्तारै सुदूर पश्चिमका अन्य सहरहरूमा पनि लागु हुने साम्राज्यले जानकारी दिए ।